အိုင်ဖုန်းသူခိုးက ပိုင်ရှင်ထံ ဖုန်းနံပါတ်များ လက်ရေးနှင့်ပြန်ပို့ပေး
ပို့စ်တင်ချိန် - 11/27/2013 09:47:00 PM
ဘေဂျင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆
ဖုန်းသူခိုး တစ်ယောက်သည် မိမိခိုးယူထားသော အိုင်ဖုန်းထဲမှ ဖုန်းနံပါတ်များကို လက်ရေးနှင့် ၁၁ မျက်နှာတိတိ ကူးယူပြီး ပိုင်ရှင်ထံ ပို့ပေးသည့် အဖြစ်အပျက်တစ...်ခု ဆင်ဟွာသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဇောင်ဘင်း ဆိုသူသည် တက္ကစီကား စပ်တူငှားစီးရာမှ သူ့ထံက အိုင်ဖုန်းကို အခြား တစ်ယောက်က နှိုက်သွားပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ ဖုန်းနံပါတ်များကို ကူးပြီး ပို့ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းသတင်းက ဆိုသည်။
ဇောင်သည် သူ့အိုင်ဖုန်းထဲတွင် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့်ကို မှတ်သားထားပြီး ထိုနံပါတ်များကို အခြား တစ်နေရာရာတွင် သိမ်းဆည်းထားခြင်းလည်း မရှိပေ။ သူက မိမိအနေနှင့် ဖုန်း ပျောက်ခြင်းထက် သိမ်းဆည်းထားသည့် အချက်အလက်များ ဆုံးရှုံးမှုကို ပိုပြီး စိတ်ပျက်မိကြောင်း သတင်းအဖွဲ့သို့ ပြောကြားသည်။
ဇောင်က သူ့အနေနှင့် အခိုးခံရသည့် ဖုန်းထံစာပို့ကာ မိမိအနေနှင့် တက္ကစီကား အတူငှားစီးစဉ်က ဖုန်းခိုးသွားသည်ကို သိကြောင်း၊ မဖြစ်မနေ ရအောင်ပြန်ရှာမည် ဖြစ်ကြောင်းကို စာပေးပို့ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် မိမိထံ အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်း ချက်ချင်း ပြန်ပို့ပေးရန် တောင်းဆိုရာ၌ ဖုန်းပြန်မလာဘဲ၊ လက်ရေးစာ တစ်ထပ်ကြီး ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။
သူခိုးက အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ထိုသို့ အရေးကြီးသည့် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များကို ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း အပေါ်တွင် ထောက်ခံသူများ ရှိနေကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း Twitter ကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်သည့် ဆိုရှယ်ကွန်ရက် Weibo တွင် လုပ်ငန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်တရားကို နားလည်ပြီး ယခုကဲ့သို့ ဖုန်းနံပါတ်များ ရေးပို့ပေးလိုက်သည့် သူခိုးကို ခွင့်လွှတ်ပေးရန် တောင်းပန်ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။
သဘာဝအတိုင်း ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ
ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု ယခင်စစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူမျာ...
အိန္ဒိယတွင် သမီးဖြစ်သူနှင့် အိမ်စေအမျိုးသားကို သတ်မ...
မီးနီဖြတ်မောင်းသည့် ယာဉ်မှ အခြားယာဉ်တစ်စီးအားတိုက်...
အိုင်ဖုန်းသူခိုးက ပိုင်ရှင်ထံ ဖုန်းနံပါတ်များ လက်ေ...
လေ့ကျင့်ခန်း အလွန်အကျွံလုပ်ခြင်းက ကျန်းမာရေးကို ထိ...
မဖွယ်မရာဗီဒီယို မူပိုင်ခွင့်ကိစ္စအတွက် တရားရင်ဆိုင်...
​ပေး​ဆပ်​သူ​တွေ​အ​တွက် ​သ​မ္မ​တ ​ဖြစ်​ချင်​တယ်​လို့...
မန္တလေးတိုင်းအနီးဝန်းကျင်ရှိ လယ်ယာမြေနှင့် ရွာမြေမျ...
ပန်းတနော်ခနွဲကဘိုလယ်သမားများ ရိတ်သိမ်းချိန်ကျမှ တာ...
သာကေတတွင် ဓာတ်ဆီပိုက်လိုင်း အဖောက်ခံရ
အခြေခံဥပဒေပြင်ရေး ကာချုပ်ပေါ်မှာ မူတည်ကြောင်း ဒေါ်အေ...
ကာချုပ်ခရီးစဉ်ရှိ၍ ထားဝယ်မြေသိမ်းခံလယ်သမားများ ဆန္ဒ...
အိန္ဒိယတွင် ကျောင်းသားပေါင်း ၄၀၀ကျော်ခန့် အစာအဆိပ်သင့်
မြန်အောင်- ဟသာင်္တ အဝေးပြေးလမ်းရှိ လမ်းပြတ်အား ပြုပြ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်ရက် မရွှေ့ပေ...
ရခိုင်တွင် မိန်းကလေးငယ်နှစ်ဦး အသတ်ခံရမှု တစ်ပတ်ကျေ...
ဆီးဂိမ်းတွင် ပါဝင်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏မြင်း က...
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ (၁)
မြေမြှုပ်မိုင်း ရှင်းလင်းရေးစင်တာ ထူထောင်ရန် အစိုး...
ဘင်္ဂါလီအရေး ကုလသမဂ္ဂ ဆုံးဖြတ်ချက် ကန့်ကွက်ပွဲ ပြည်သူ...
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ကိုယ်တိုင် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး...
မြန်မာပြည် ငွေစက္ကူမှာ ပုံထည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့ပုံထည...
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ အကူအညီ ပေးသူများကို အုပ်စုဖွဲ့ နေ...
Laptop ဘက်ထရီ ကြာကြာသုံးနိုင်ဖို့
အမျိုးသမီးများ နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ခန့် လမ်းလျှောက် ပေး...
ကိုင်းခုတ်ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်...
မျက်ခွံမို့ခြင်းနှင့် မျက်ကွင်းညိုခြင်းအတွက် သဘာဝက...
အိပ်မပျော်စေရန် အနှောင့်အယှက်ပေးသည့် ရောဂါများ
သွေးတိုးရောဂါအား ကုသရာတွင် တရားဝင်လက်ခံထားသည့်ကုသန...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အမျိုးသားနေ့ သဝဏ်လွှာ
ဇာဂနာလေးက ကျေးဇူးရှိတယ်လို့ ဦးခင်ညွှန့် ပြော
အမဲသားဈေး နှစ် ၄၀အတွင်း စံချိန်တင်မြင့်တက်
၀ိုင်ယာကြိုးကိုဖောက်၍ နေအိမ်သို့ မီးသွယ်ရန်ကြိုးစာ...
ငွေစက္ကူအတုထုတ်လုပ်သူများအား ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆစ်ဒနီ ရောက်ပြီ
ပါးရေတွန့်ခြင်းကို သင်္ဘောသီးဖြင့် ဖျောက်ဖျက် ပစ်ပါ
ဘ၀ဆိုတဲ့ လက်ဆောင်ကောင်း ( Life isagift)
တရုတ်နိုင်ငံက လပေါ်သို. ဂြိုဟ်တု လွှတ်မည်
Google Play Newsstand သုံးနိုင်ပြီ
လုမ္ဗီနီတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု ဗုဒ္ဓမွေးဖွားရက်ကို ပြေ...
အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ လူမှုရေးထူးချွန်ဆု မြန်မာနို...